Myanmar: Pôlitika vaovao mitaky ny fisoratan’anaran’ireo vondrona miady amin’ny VIH · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2009 6:09 GMT
Ny HIV Information for Myanmar (HIM) dia nanoratra lahatsoratra momba ny fanovàna vao haingana ny pôlitika mikasika ny fitsanganan'ireo vondrona eo anivon'ny tambajotram-baovao People Living with HIV (PLHIV) – ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH.
Nampian'ilay mpanoratra taratasy avy amin'ny Solombavambahoaka Tale Jeneralin'ny Sampana Fitiliana Aretina eo ambany fahefan'ny Ministeran'ny Fahasalamana, ho an'ireo Mpitsabo-Lehibe [médecin-chef] ao amin'ny Tarika mpitily sy mpanara-maso ireo areti-mifindra azo amin'ny firaisana ara-nofo sy ny VIH.
Nametraka izao tsikera izao ny mpamaky tsy mitonon'anarana iray:
Nisy mpamaky hafa namela tsikera manazava momba ireo toetoetry ny fahasalamana any Myanmar. Nanoratra momba ny toe-piainan'ireo mararin'ny VIH any Myanmar koa izy:
Matahotra ny sasany sao dia ampiasaina “hifehezana” na hanimbana ny fahaleovantenan'ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo any Myanmar ity pôlitikan'ny governemanta vaovao ilàna ny fisoratana anaran'ireo vondrona miady amin'ny VIH ity. Nisy mpamaky hafa koa naneho ny ahiahiny tanatina tsikera mitodika amin'ireo olana lalovan'ny ONG taorian'ny Hetsi-panovàna Saffron tamin'ny taona 2007.
Araka ny lahatsoratra an-gazety avy amin'ireo Mpitsabo Tsy Manana Sisintany (Medecins Sans Frontieres) tamin'ny 25 Novambra 2009, eo amin'ny olona 240000 no eritreretina ho mitondra ny tsimok'aretina VIH/SIDA any Myanmar. Amin'izy ireo, 76000 no mila fitsaboana ‘anti-retro-viral’ maika, ary latsaky ny 20% amin'izy ireo ihany no afaka mahazo izany.
19 Marsa 2021Azia Atsinanana
18 Marsa 2021Azia Atsinanana